Maraykank oo weli ay ka socdaan Banaanbaxyo looga soo horeedo dilkii ninka madawga ahaa. - Horseed Media • Somali News
June 1, 2020Somali News
Maraykank oo weli ay ka socdaan Banaanbaxyo looga soo horeedo dilkii ninka madawga ahaa.
Waxaa weli dalka maraykana kusii fidiyaBanaanbaxyo ay wadaan dadka kasoo horjeeda dilkii loo gaystay ninkii madawga ahaa ee lagu magacaabi jiray George Floyd ay u gaystaan ciidanka ka tirsan Booliska Minneapolis oo cadaan ah.
Dawlada Maraykanka ayaa soo rogtay awaamiir la xiriirta bandaw balse banaanbaxayaasha ayaa midaas aan u joojin iyagoo sii wattay mudaharaadkooda, in badan oo ka mid ah ayaa ku dhawaaqay erayo ay uga hadlayaan dhibta lagu hayyo dadka madawgga ah.
Madaxweynaha Maraykanka ayaa sheegay in arinkani ay tahay musiibo, sidoo kale waxaa xabsiga la dhigay ninkii ka dilay Floyd, mudaharaadyadda ayaa sii fiday waxayna gaareen Dalalka Canada, Britain iyo wadamo kale.
Horseed Media, 2020
Wasiirka Gaashaandhigga oo kulan la qaatay Golaha Nabadda iyo Amniga EU
Puntland oo ka hortimid qodobadii kasoo baxay Isimada ee arinta PSF
Isimada Puntland oo go’aamo kasoo saaray xiisadda Hay’adda PSF
Yuweri museveni “Qaraxyadii Kampala waxaa laga soo abaabulay Kenya iyo Soomaaliya
Banaanbax looga soo horjeedo Maamulka Somaliland oo xalay ka dhacay Laascaanood